Pair Bonders သည်စွဲလမ်းမှုကိုပိုမိုအားနည်းစေပါသလား။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
Pair ကို Bonders စွဲဖို့ပို Vulnerable ဖြစ်ပါသလား (2010)
In လူ့ဦးနှောက်မေတ္တာတော်၌တည် Fall မှတည်ဆောက်နေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲ၌ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီဇအတိုင်းနောက်ကွယ်တွင်ရှိသောအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအဖြစ်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများသည်ကာလကြာရှည်စွာတွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည်မျိုးစိတ်များအတွက်အရေးကြီးသောအရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကျနော်တို့အတူတူကြောင်းလေ့လာသည် Bond အပြုအမူတွေ ကြောင်းမစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်သုခချမ်းသာကိုတိုးမြှင့်အားကောင်းလာစေရန်။
ဒီဆောင်းပါးမှာအိပ်ခန်းထဲမှာရောအပြင်ထဲကပါစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်စေတဲ့လျှို့ဝှက်စုံတွဲတွဲမှုအားနည်းချက်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အမည်များ, ပိုလျှံကိုလိုက်ရန်သဘောထားကို။ vole မျိုးစိတ်နှစ်ခုအား amphetamines များကမ်းလှမ်းသောအခါသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤအန္တရာယ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါမျိုးစိတ်ပုံတူညီပေမယ့်တ ဦး တည်းဝိသေသအဘို့။ တစ်ခုသည်ငွေချေးစာချုပ်တစ်မျိုး၊ (စဉ်းစားပါ လူ့ နှင့် bonobo။ ကျွန်ုပ်တို့၏ limbic ဦး နှောက်သည်တွဲဖက်မှုအတွက်“ ဂီယာ” (bonobo's) မပါ ၀ င်ပါ။
မည်သည့်မျိုးစိတ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမို အသုံးပြု၍ ဦး နှောက်၏မြင့်မားသော dopamine ကိုပြသခဲ့သည် (“ ကျွန်ုပ်ရသင့်သည်” အာရုံကြောဓာတု) ။ အဆိုပါစုံတွဲကို-bonding မျိုးစိတ်။ (ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပိုပြီးပါတယ် မကြာသေးမီဆောင်းပါး အရက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရုံဘယ်လောက်ကျရောက်နေတဲ့တစ်စုံ-Bond မျိုးစိတ်ပြသုတေသနအကြောင်းကို။ )
သူတို့၏ ဦး နှောက်၏အကျိုးဆက်အားဖြင့် D2 ဟုခေါ်သော dopamine receptor အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ D2 ကို“ တဏှာ” receptor အဖြစ်စဉ်းစားပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် non-pair-bonders များတွင်“ D1” receptors များစွာရှိသည်။ D1s များသည်နားလည်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည် ဖြေလျော့ ပြင်းထန်သောဆွများအတွက်မတရားသော။ dopamine အလုံအလောက်ပြည့်နှက်သွားသောအခါ D1 receptor များက“ အိုကေ၊ ငါဒီဆေး၊ ဒီအရက်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုရူးနေတဲ့ကြောင်ကြောင်တွေများနေပြီ။ ငါ့နေ့တစ်နေ့ငါရောက်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ *
လိင်သည် chimps များအတွက်ပျော်စရာကောင်းသော်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျဆင်းခြင်း (နှောင်ကြိုးနှင့်တွဲရန်တိုက်တွန်းခြင်း) သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များ၏မျိုးရိုးဗီဇအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ မူးယစ်ဆေးခရီးစဉ်။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံ, တစျထောငျသင်္ဘောများဖြန့်ချိသည့်နိုင်ငံရေးအလုပ်အကိုင်များကိုဖကျြဆီးခွငျး, ယဇ်ပုရောဟိတ်သစ္စာဂတိကိုချိုးဖျက်စေရန်လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သည့်အခါတစ်စုံနှောင်ကြိုးလပ်ချိန်အတူတူလက္ခဏာသက်သေအသုံးပြုပုံကခုတ်ဓားမဖမ်းပြီးတစ်ခု appendage ချွတ် hack ဖို့စွန့်ပစ်မိတ်ဖက်လှုံ့ဆျောပေးနိုငျသညျ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pair-bonding အစီအစဉ်ကိုလျှော့မတွက်ကြစို့နှင့်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကဝေးဝေးတစ်ခု exaptation ဖြစ်နိုင်သည် အဟောင်းတွေနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေအစီအစဉ်ကို, မွေးကင်းစနှင့်စောင့်ရှောက်သူများ bonds သောတဦးတည်း။ သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ် (နဲ့အတူနှောင်ကြိုး) ၏ရှင်သန်မှုရှယ်ယာမှာအခါမိဘများလည်း gunning သွားပါ။
ဆပ်ပြာ Opera နဲ့အဖြစ်မှန်ပြပွဲဒီအစွမ်းထက်ဦးနှောက်ယန္တရား၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းသောသာသည်အခြားဆိုထားပါသည်မရှိကြပေ။ ဒါသည် စှဲမွဲမှု။ ဒါကြောင့်ပုံရသည်အဖြစ်ထူးဆန်း, မေတ္တာ၌ကရြောကျ (နှင့်လေ့၏အထိမိတ်) ရန်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်အလွန်အကျွံသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် hijack ပေးသောအားဖြင့်ငြိမ်ဝပ်နောက်ကွယ်မှဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်မေတ္တာ၌ကရြောကျသညျ့အခါသူတို့အား All-စားသုံးခံစားချက်တွေကိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆုလာဘ် circuitry သည်, ဖြစ်ပါတယ် တူညီတဲ့ အလွဲသုံးစားမှု၊ အရက်သေစာ၊ အလွန့်အလွန်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၊ လောင်းကစားခြင်း၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအစားထိုးသောအခါသုံးစွဲသူများကြုံတွေ့ရသည့်အကုန်အကျများသည့်ခံစားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီအလွန်အမင်းထိခိုက်မခံတဲ့ circuitry မဆိုကာကွယ်ရေးအတိတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းအားပေးရန်ပြောင်းလဲနှင့် ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သူများအပေါ်ချိတ်ဆက်ရအနည်းဆုံး -at အလုံအလောက်ငါတို့သားသမီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲရှည်လျားသည်။ တခြားလုပ်ငန်းများနှင့်တ္ထုများမှစွဲလမ်းမြှင့်တင်ရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမပေးခဲ့ပါဘူး။ သာသညျလူသားတို့ကိုမှန်မှန် dicey အစားထိုးနှင့်အတူဤယန္တရားအသုံးချနိုင်သည်။
ကျွန်ပ်တို့နှောင်ကြိုးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ထဲတွင်အပိုအပေါက်တစ်ခုရှိနေသကဲ့သို့ငါ့ကိုတက်ဖြည့်ပါ။၎င်းသည်ဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကရွေးချယ်မှုသည်ရံဖန်ရံခါ ၀ တ္ထုဆိုင်ရာလိင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အတု အစားထိုးပျက်ကွက်ခဲ့ကြ။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီအပေါက်ကြီးဟာဒီနေ့ခေတ် ဦး နှောက်ထုတောက်ပနေတဲ့အလိုဆန္ဒတွေကြောင့်ဘယ်တော့မှမပြည့်နိုင်ပါဘူး။ အလွန်အကျွံဆွ dysregulates ဦးနှောက်ကဒီအစိတ်အပိုင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Over-stimulation ဦးနှောက် recover နေချိန်မှာဒါဟာနောက်ဆက်တွဲ neurochemical စိတ်ဓာတ်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါစိတ်ဓာတ်, အလှည့်၌, Self-စေရန်ဆေး ပို. ပင်ပြင်းထန်သောမတရားသောမောင်းနိုင်ပါတယ်။ ကဲဒါဆိုရင်တော့! ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မသိခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်လမ်းကို ၁၂ ဆင့်ပါအုပ်စုတစ်စုတွင်မျှဝေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဤအင်္ဂါရပ်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနှင့်အဘယ်ကြောင့်မကြာခဏလာမည့်ပြင်ဆင်မှုကိုအဘယ်ကြောင့်ရှာဖွေရကြောင်းရှင်းပြရန်ဝေးသွားနိုင်သည်။ နောက်ထပ် အသစ်အဆန်း။ နောက်ထပ် နှိုးဆွ။ တကယ်တော့ငါတို့မှာလှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့တယ်၊ ငါတို့ချိန်ခွင်လျှာမကျဘူး
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြပ်အတည်း Bond အပြုအမူတွေကိုသူတို့ချည်နှောင်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့စေတစ်ချိန်တည်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုဝေဒနာတွေထဲကထောက်ပြသောဤဆောင်းပါး၏အပိုင်း 1, ပြန်စေပါတယ်။ သူတို့လက်ျာ receptors များအတွက် oxytocin ၏နှစျသိမျ့အဆင့်ဆင့်ထုတ်လုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလုပ်ကိုင်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ oxytocin အဘို့မတရားသောလျှော့ချရန်ပြသထားသည် သကြား နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချရန်။ ချစ်သူများအနေဖြင့်နေ့စဉ်နှောင်ကြိုးအပြုအမူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများ (စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ) နှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများကို ပိုမို၍ လိုက်စားခြင်းမပြုနိုင်သောနည်းလမ်းဖြင့်၎င်းတို့အကြားလေ့ကျင့်ခန်းများကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည်ကိုအဘယ်ကြောင့်သတိပြုမိပါသနည်း။
လူသားမြားသ bonobos နဲ့တူလုပျဆောငျနိုငျရင်တောင်ကျနော်တို့ pair တစုံ bonders အဖြစ်ချိန်ခွင်လျှာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ရွေးချယ်စရာစူးစမ်းလျှင်, ငါတို့သည်ပိုပြီးအကြောင်းအရာဖြစ်လိမ့်မယ်။
လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်ကြင်ဖော်မဲ့နေခြင်း၊ ဘဝတစ်ခုလုံးကိုစုစည်းခြင်း (သို့) တည်မြဲသောနှောင်ကြိုးများမရှိဘဲပန်းများစွာကိုဝတ်မှုန်ကူးခြင်းဖြင့်မိတ်လိုက်ခြင်းပြဇာတ်အများစုကိုရှောင်ကွင်းရန်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သူသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တွဲဆက်နေသော ဦး နှောက်နှင့်ကပ်နေသည်။ ဤဝါယာကြိုးသည်ဘဝကဏ္areasများတွင်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်မှုမရှိသောအဓိကသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆက်ဆံရေးအတွက်သို့မဟုတ်ထွက်အခြားသူများနှင့်အတူနေ့စဉ်ချစ်ခင်အပြန်အလှန်အနည်းငယ်သာနှင့်အလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်မှုနိုင်ပါတယ် ဒုက္ခဆင်းရဲကိုတိုးမြှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိအသိပညာမပါဘဲ။
လူ့ ဦး နှောက်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားသည်။ စုံတွဲပေါင်းသင်းခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အလေ့အကျင့်များပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသံသရာသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများ၌လူမျိုးနွယ်စုများအကြားကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇကိုအစဉ်တစိုက်ကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စုံတွဲချိတ်ဆက်ထားသော ဦး နှောက်၏အလွန်အထိခိုက်မခံသောဆုလိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုသတိပြုမိခြင်းအားဖြင့် (၁) ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်မှထွက်သောလှူဒါန်းခြင်းနှင့် (၂) တရားအားထုတ်ရန်ကဲ့သို့သောသဘာဝနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုသက်သာစေရန်သင်ယူခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာတွက်ချက်နိုင်သည် လေ့ကျင့်ခန်း၊ ယောဂ၊ နှောင်ကြိုးအပြုအမူများနှင့်ဂရုတစိုက်စိုက်ပျိုးခြင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲစပ်မှုအစီအစဉ်သည်လူသားတို့၏အတွင်းစိတ်မျှတမှုကိုခိုင်မာစေသည့်“ ဝိညာဉ်ရေးရာ” အလေ့အကျင့်များအတွက်အဓိကတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
* Vole သုတေသီများသည် D2 (တုန်ခါနေသော) receptors ကိုထွန်းလင်းစေသည့် dopamine ကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိုစီမံခန့်ခွဲသော်လည်း D1 (satiety) receptors များကိုမဟုတ်သည့်အခါ voles များသည်ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်းကိုကြား။ ကြယ်များကိုမြင်ရသည်။ ထိုအချိန်ကကွဲပြားခြားနားသောအိတ်များ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ (D2s ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ) D1 receptors ကို activate လုပ်ခြင်းကိုတားဆီးသည့်အခါတွင် gametes မျှ Valentine အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်းမရှိပါ။ ဦး နှောက်အတွင်းရှိယန္တရားများကအစပျိုးသော dopamine သွေးဆောင်မှုများကိုပေါင်းစပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤယန္တရားများမရှိဘဲနှင့်“ bonding hormone” ဖြစ်သော oxytocin သည်ပင် voles ကိုမချစ်စေနိုင်ပါ။